Fiatrehana ny toe-draharaham-pirenena : Manetsiketsika ny avy any amin’ny Faritra ny Kung Fu Wisa -
AccueilSongandinaFiatrehana ny toe-draharaham-pirenena : Manetsiketsika ny avy any amin’ny Faritra ny Kung Fu Wisa
Fiatrehana ny toe-draharaham-pirenena : Manetsiketsika ny avy any amin’ny Faritra ny Kung Fu Wisa
31/01/2018 admintriatra Songandina 0
Fotoana iray nanamafisan’ny fianakaviamben’ny Kung Fu Wisa ny firaisan-kinany ny sabotsy teo, teny amin’ny « Temple de Pierre Mizael » Ambatomirahavavy. Vory lanona tamin’io fotoana io avokoa mantsy ireo « maitre » Kung Fu sokajy zokiny miisa 502, avy amin’ny faritra maro. Na ireo avy amin’ny faritra saro-dalana tahaka ny avy any Ambovombe, Maroantsetra, Maintirano dia nahatonga solontena tamin’izany. “ Ankoatra ny fiofanana ara-teknika amin’ny maha fanatanjahantena azy, dia niompana tamin’ny fandinihana ny toe-draharaham-pirenena ihany koa ny fotoana. Isan’izany ny fiatrehana ny fifidianana, izay hatao amin’ity taona ity. Napetraka ny paikady rehetra ho fiatrehana izany”, araka ny fanazavan’ny Maitre Avoko Rakotoarijaonina.
Tsy manao politika akory ny Kung Fu, saingy kosa miaina eo anivon’ny fiarahamonina, ka mahatsiaro tena ho manana adidy amin’ny raharaham-pirenena. Noho izany indrindra dia raisiny ho adidy ny fijoroana hampisy ny fiarahamonina mirindra.
Manana ny olony tokoa ny mpanao Kung Fu, ary saika misy ny rantsa-mangaika avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy. Amin’io volana febroary ho avy io dia anjaran’ireo Maitre Kung Fu sokajy tanora miisa 1 200 indray no ho avy aty amin’ny foibe hanatanteraka fihaonana tahaka io tamin’ny sabotsy io. Marihina moa fa ny Maitre Kung Fu iray dia manana mpianatra na mpikambana maromaro eny anivon’ny faritra misy azy eny. “ Nohantitranterina tamin’ireo Maitre Kung Fu ireo ny hanohizany ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana any anaty fiarahamonina samihafa any”, raha ny fanazavan’ny Maitre Avoko hatrany.
Eo amin’ny lafin’ny fiainam-pirenena kosa, dia mazava ny tapaky ny zaikaben’ny antoko tarihin’ny Maitre Avoko fa manohana ny ezaka tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nangataka ny firotsahan’ny filoha ankehitriny izy ireo, mba hanohizana izany fampandrosoana efa napetraka izany, ary manohana ny vina 2030 napetraky ny filoha ao anatin’ilay « Fisandratan’i Madagasikara ».